Software Development များအတွက် 10 အကောင်းဆုံး Certificate | ၎င်းတို့အား Tech မှကျောင်း
31 ဇန်နဝါရီ 2018
Software Development များအတွက် 10 အကောင်းဆုံး Certificate
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့အထက်သို့ဦးတည်ချက်အပေါ်အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ, coder တွေနှင့် developer အများဆုံးယနေ့ခေတ်ကျွမ်းကျင်သူများကပြီးနောက်ကိုမြော်လင့်နေကြသည်။ ဤသည်ရံဖန်ရံခါထိုအကျွမ်းကျင်သူများကတစ်ဦးလက်မှတ်သင်တန်းကိုရိုးရှင်းစွာအခညျြးနှီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှာ, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်လှဲမှားသောတရားသဖြင့်စီရင်ကြောင်းအတိုးဖို့တက်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
က programming နဲ့တိုးတက်မှု၏အထူးဒေသများ၌သင်တို့၏အကွံ၏အလားအလာအကြီးအကဲတွေဖွားယောအဖြစ်ဆိုင်တဲ့လက်မှတ်သင်တန်းကိုအလုပ်သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အလားအလာအဆင့်မြှင့်အတွက်ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဒါကလှဲမှားသောတရားသဖြင့်စီရင်သည်။ သိသာထင်ရှားသောအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းလုပ်နိုင်နှင့်ပြုသူ / သူမ၏အပေါင်းအသင်းကြားတွင်ပေါ်ထွက်လာဖို့ပြိုင်ဘက်ခွင့်ပြုမယ့်သော့ချက် differential အဖြစ်အကြောင်းကိုသွားပါ။
ဒီအရေးကြီးသောရှုထောင့် Remembering ယခုကြှနျုပျတို့ကိုသင်သိမ်းပိုက်စီးပွားဖြစ်စင်တာတစ်ခုခြောအစွန်းပေးနိုငျသောအဓိက 10 အရေးအပါဆုံးနှင့် propelled developer အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်၏ rundown ပြ။
Developers များအတွက် 10 အကောင်းဆုံး Certificate
1 ။ Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)
Microsoft ကထုတ်ပေးအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းဖြစ်ကောင်းသူတို့နှင့်အတူကြီးမားတဲ့အလေးချိန်သယ်ဆောင်သည့်အိုင်တီလောကရှိအရှိဆုံး adored အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးပြုစုသူများမှာသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သငျသညျဒါ့အပြင်လမ်းအဆင့်အထိ Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) အစီအစဉ်၏အလယ်တန်းနှင့် တွဲဖက်. ကျမ်းပိုဒ်အဆင့်ကို Microsoft ကနည်းပညာတွဲဘက် (MTA) ကိုယူပြီးအားဖြင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ထက်မြက်နိုင်ပါတယ်။
2 ။ Microsoft က (MTA)
ဤသည်ကို Windows တိုးတက်မှုအတွက် MTA အောင်လက်မှတ်သင်တန်းပူဇျောသက်ကာအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်, တိုး programming, ဒါကြောင့်အပေါ်အလယ်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ခွဲဘို့နဲ့ပရိုဂရမ်းမင်း၏ဝဠာအသစ်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့စီစဉ်ထားသည်။
3. အမေဇုံက Web Services က (AWS)
AWS ကို web applications များဖန်တီးခြင်းနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့ရန် On-တောင်းဆိုမှုကိုသည်မိုဃ်းတိမ်စင်မြင့်ပေးခြင်းများအတွက်လူသိများသည်။ ဤသည်မှာလက်မှတ် outline, အဆောက်အဦးများနှင့် AWS ဇာတ်စင်ပေါ်တွင် applications များ running ၏အမှု၌နေသော developer များအတွက်အများဆုံးကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။
4 ။ Cloudera (CCDH)
သငျသညျ Apache ကို Hadoop တိုးတက်မှု Apache ကို Hadoop (CCDH) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဘို့သင့် Cloudera လက်မှတ်ရ Developer တွေတက်ကောက်နေ၏ပါတီအားအတွက်ကိုတိုးချဲ့, အောင်တက်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီနေကြသည်။
5. Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (PMI)
PMI အကောင်းဆုံးအကျိုးတူအကြီးအကဲများများအတွက်မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးနဲ့တကမ္ဘာလုံးကိုရိပ်မိလက်မှတ်ဖြစ်သည့်၎င်း၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က (PMP) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေအတွက်လူသိများသည်။
6 ။ Scrum
အဆိုပါကျမ်းပိုဒ်အဆင့် Scrum မဟာမိတ်အဖွဲ့လက်မှတ်ရ Scrum ရေးသားသူ (CSD) လက်မှတ် Scrum စံချိန်စံညွှန်းများ၏အခြေခံအကျဆုံးသင်ယူမှုရှိခြင်း developer များအဘို့ဖြစ်၏။
7 ။ Oracle က (Apex)
ယခင်က HTML ကို DB လို့ခေါ်တဲ့ Oracle ကလျှောက်လွှာ Express ကိုရေးသားသူလက်မှတ်ရကျွမ်းကျင် (Oracle က Apex), တုံ့ပြန်မှုဒေတာဘေ့စ-မောင်းနှင် applications များဖျောပွခြင်းနှင့်ဖန်တီးရန်ဤအစာရှောင်ခြင်းက web application ကိုတိုးကိရိယာ၏အသုံးချစေသူကို developer များအဘို့ဖြစ်၏။
8. ရုပ်သေး Labs က
ပတ္တမြား scripting နည်းကရင်လူမျိုးများအသုံးချအောင်တစ်ဦးကရုပ်သေး Labs ကရုပ်သေးရေးသားသူစာကျွမ်းကျင်မှုရုပ်သေး Labs ကအိုင်တီတိုးပွား programming mechanization စေနိုင်သည်။
အဆိုပါ Red Hat Certified JBoss ရေးသားသူ - RHCJD ဆော့ဖ်ဝဲရေးလက်မှတ်အဆင့်ဆင့်လက်ခံပေးနိုင်ရန် JEE အပေါ် JEE applications များအတွက်သင့်ရဲ့စွမ်းရည် authenticates ။
10 ။ Salesforce
Salesforce လက်မှတ်ရ Developer Force.com ဇာတ်စင်၏လမ်းညွှန်နှင့်အတူ redid applications များထုတ်လုပ် developer ၏စွမ်းရည်ရိပ် မိ. ။
အဘယ်ကြောင့် PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးစီမံကိန်းမန်နေဂျာများအတွက်လိုအပ်သနည်း